JINGHPAW KASA: လော့ပွမ်တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်ဗျူဟာမှူးကျဆုံး
ဒီဇင်ဘာ (၃) တနင်္လာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုး၇ တပ်မဟာ (၅) လက်အော် တပ်ရင်း (၃) နယ်မြေဖြစ်သော လော့ပွမ် တွင် ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့၌ ကေအိုင်တပ်ရင် (၃) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ၏ တပ်မှ (၈၈) လက်အောက်မှ တပ်ရင်းများပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ဗျူဟာမှူးတစ်ဦး အပါအ၀င် တပ်သား အများအပြားကျဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်များသည် ကေအိုင်အေ တပ်စခန့်သို့ အင်အား အများအပြားဖြင့် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာပြီး၊ နောက်တန်းမှလည်း (၁၂၀မမ) လက်နက်ကြီးများဖြင့် အပြတ်ပစ်ခတ် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဗမာစစ်တပ်များ ဤသို့ စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကေအိုင်အေ တပ်စခန်းတစ်ခုကို လက်လွှတ်ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေမှ လက်လွှတ်သွားသော တပ်စခန်းကိုပြန်လည်ရရှိရန် စစ်အင်အားများပြန်လည် ပို့ဆောင်လျင်ရှိပြီး၊ ယခုချိန်အထိ တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရ ဗမာစစ်သားများကို စစ်ကား (၃) စီးဖြင့် ၀ိုင်းမော်သို့ တင်ဆောင်လာကြောင်း ၀ိုင်းမော်မြို့ ဒေသခံ များထံမှ သိရှိရသည်။
There wasaseveral battle between KIA (5) battalion and Burmese Government troops from (88) division in Law Pum, which is under KIA (3rd) Brigade area, on 2nd December according to the KIA front-line officer report. Many Burmese soldiers including Commander were killed in that battle. Not only many Burmese troops were launched an offensive action to the KIA front line area but also fired (120) MM artillery weapon from the back row. Because of such huge offensive action, KIA lost one area temporary. KIA has sent more troops to get again that loosing area and the battle were becoming more several. Many wounded Burmese soldiers with (3) military track were carried to the Wai Maw hospital.
MAJANaMADU KARAI WA kaw kyu hpyi ap nawng let, matut gasat anut gawt kau mu ,MYU TSAW BRANB NI E,WA DI ni mung kyu hpyi ya nga ai yaw.
SORRY YAW ,MYU TSAW BRANG NI NGU AI SHE RE, WA DI MYI AI NTAI MAT AI MAJAW KA SHUT AI RE YAW, SHARAI HTI YA MI YAW.